ချစ်ခင်ရသူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုအားပေးနှစ်သိမ့်ပေးမလဲ? – Trend.com.mm
မိသားစုထဲကဖြစ်စေ၊အသိမိတ်ဆွေထဲကပဲဖြစ်စေချစ်ခင်ရသူတစ်ယောက်ယောက်ကိုဆုံးရှုံုးလိုက်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ပေးဖို့ဆိုတာလက်တွေ့မလွယ်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားဖူးတဲ့သူမှသာ ချစ်ရသူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည် ကိုယ်ချင်းစာပေးနိုင် ပါတယ်။ဘေးနားကအားပေးနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့သူတွေကတော့ ဘာပြောရမှန်းမသိကြသလို၊ ပူဆွေးဝမ်းနည်းနေတဲ့သူကိုနောက်ထပ်ဒဏ်ရာပေးသလိုမဖြစ်စေဖို့ စကားပြောဆိုတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။အခုခေတ်ကာလ လူတစ်ချို့ဟာ စကားကိုပြောသ့င်တဲ့နေရာ၊ မပြောသင့်တဲ့နေရာ ဆိုတာလည်း မခွဲခြားတတ်ပဲ စိတ်သက်သာရာရမယ်ထင်ပြီး မပြောသင့်တာတွေ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးရမယ့် စကားတွေ၊မပြောသင့်တဲ့စကားတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၀မ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် ဒီစကားလေး တွေပြောပေးပါ။သူ့အတွက် အနည်းငယ်စိတ်သက်တောင့်သက်သာရှိနိုင်ပါတယ်။
၁)မင်းရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး
စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စကားက ဘာမှမပြောတာထက်စာရင် အနည်းအကျဉ်းစိတ်ဖြေသာရာရပါတယ်။
၅)ငါလည်း (သေဆုံးသွားသူ)ကို သတိရပါတယ်။
၆)ငါဘာပြောသင့်လဲဆိုတာ မသိဘူး။(ရိုးသားမှုက အကောင်းဆုံးပါပဲ)ဘာမှမပြောတာထက်စာရင် ဒီစကားလေးက ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။
လူဆိုတာသေမျိုးပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်း ချစ်ခင်ခဲ့ကြတဲ့သံယောဇဉ်တွေကြောင့်အလွယ်တကူတရား နဲ့ဖြေလိုက်လို့မရပါဘူး။အချိန်တဖြည်းဖြည်းကြာသွားမှသာ နေသားကျသွားမှာပါ။ ဒါကိုလူတိုင်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီစကားတွေ သွားပြောနေလို့မရပါဘူး။ပိုပြီးဝမ်းနည်းရုံသာရှိပါတယ်။
၁)သေချိန်တန်လို့သေသွားရတာပဲ…ဒါကလူတိုင်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဒီလောက်ထိပြောဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
၃)မင်း ဒီနေ့ပိုပြီးစိတ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ရဲ့ လား?
၄)သူ ဝေဒနာကိုဒီထက်ပိုပြီးမခံစားရတော့ပါဘူး။ ရောဂါဝေဒနာကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူဖြစ်နေရင်တောင် ဒီလိုစကားတွေမပြောသင့်ပါဘူး။
၅)သေဆုံးသွားသူက သားသမီးဖြစ်နေရင် မင်းမှာ နောက်ထပ်ကလေးတွေ အများကြီးရနိုင်ပါသေး တယ်ဆိုတာမျိုးသွားမပြောမိပါစေနဲ့။ကလေးထပ်ရနိုင်ပေမဲ့လည်း ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီစကားနဲ့ဖြေသိမ့်မှုမဖြစ်စေပါဘူး။
ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုအမြဲပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေရလို့ ကိုယ့်အတွက်တောင်အချိန်မပေးနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကိုဘေးလူကသိရင်တောင် ဒီလိုစကားမျိုးကိုမပြောသင့်ပါဘူး။လူတစ်ယောက်သေဆုံးသွားတာပျော်စရာကိစ္စမှမဟုတ်ပဲ။
ပြောသင့်တဲ့စကားနဲ့မပြောသင့်တဲ့စကားကိုသေချာမှတ်သားထားပြီး ဆွေမျိုးသားချင်းဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့သူတစ်ယောက် ကိုသေချာနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ပါစေ။
သမီးလေးနာမည်ပေးပြီးပြီလို့ အင်စတာဂရမ်ကနေ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့ Kylie Jenner